Uphi iiVideos zeVenkile eziGciniweyo ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Apho iividiyo ze-instagram zigcinwa khona
Juni 30, 2019 0 IiCententarios 1552
Nangona ekuqaleni i-instagram yayisisicelo kuphela kunye neqonga leefoto. Emva kwexesha iividiyo zangenwa. Ukudityaniswa kweevidiyo kupapasho lwe-instagram yenye yeendlela zokuqala zokuhlaziya ezenziwe kwiqonga lakhe. Namhlanje asicingi ukuba iya kuba yi-instagram ngaphandle kweividiyo zayo. Kwaye asicingi ukuba iya kuba njani i-instagram ngaphandle kohlaziyo lwayo rhoqo, okude ekuphuculeni nasiphi na isiphoso. Banika ukubonakala okungaphezulu kunye nokusetyenziswa eqongeni.
Abasebenzisi abatsha be intanethi. Olunye uhlaziyo alukaziwa. Eminye imisebenzi ikwafumaneka ngokufanayo. Ukuze abasebenzisi bafunde ngcono ukuba banjani kwaye apho iividiyo ze-instagram zigcinwa khona. Esi sikhokelo sisisiseko.
Ndizigcina phi kwaye ndizibeka phi iividiyo zam ze-imeyile?
Ngaphakathi kwi-instagram kunye ne-instagram yangaphandle unokufumana iindlela ezahlukeneyo zokugcina iividiyo ze-instagram. Ukubonisa ukuba njani kwaye njani indawo yokugcina iividiyo ze-instagram ngokukhuselekileyo. Uyigcina phi kwaye phi indawo iividiyo I-Instagram iyahluka ngendlela oyikhethayo. Iindlela zokonga i-instagram zezi zilandelayo:
Zigcinele amabali e-Instagram.
Ngekhetho eligcinwe ngaphakathi kwi-instagram.
Ungazigcina kanjani iividiyo zamabali e-instagram
Amabali e-Instagram abe yenye yezinto azithandayo zabasebenzisi. Ukwazi ukuba njani kwaye njani apho iividiyo ze-Instagram zigciniweyo Le yeminye imibuzo ebuzwa rhoqo ngaphakathi eqongeni. Amabali e-Instagram anokubona ukuba neendlela ezintathu ezahlukeneyo zokugcina. Okulandelayo siza kukubonisa:
Olona khetho lutsha lokugcina kwi-instagram aluvumeli kuphela umsebenzisi ukuba azixabise izihlandlo ezibalulekileyo. Kodwa yabelana nabalandeli bakho kunye nabanye abasebenzisi be-instagram. Inketho yokugcina kunye nokwenza iialbham ngaphakathi kwe-instagram. Ivumela abasebenzisi bayo ukuba babe namabali abawakhetha kwii-albhamu ezibonakalayo kwabanye abasebenzisi kwiprofayili yabo. Apha ngezantsi kwenkcazo. Umsebenzisi unokuqhubeka nokongeza iiposti, hayi iividiyo kuphela kwii-albhamu.
Ngokungafaniyo namabali e-instagram aqhelekileyo, amabali agciniweyo kwii-albhamu awanamda we-24 iiyure. Bahlala bekho.
Gcina emva kokuhlela
Njengeefoto. Amabali e-Instagram anokusebenza njengomhleli. Ukusuka apho unokwenza khona iinguqu kwividiyo okanye kwifoto yokugcina kamva ngaphandle kwesidingo sokuyipapasha. Ukugcina, kufuneka ucofe i icon ebonisa ukuba iyasibonisa. Emva kwexesha uza kwazi apho iividiyo ze-Instagram zigciniweyo Ukungena kwigalari okanye iividiyo kwifowuni yakho ephathekayo.
Ukuba i-instagram yakho ilungiselelwe ngokugcina ngokuzenzekelayo. Amabali okanye iividiyo ezipapashiweyo ziya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwimemori yefowuni yakho. Kwaye ukwazi ziphi iividiyo ze-instagram kufuneka uphendle iividiyo okanye igalari yesixhobo sakho esiphathwayo.
Olunye uhlobo lwe-autosave oluhlaziyo olutsha eqongeni. Yifayile yekhabhinethi. Ukusuka apho kungagcinwa kuphela iiposti ze-instagram. Kodwa amabali enziwe agcinwa ngokuzenzekelayo. Iividiyo zibonakala kumsebenzisi ongumnini wamabali agciniweyo.
Iividiyo ezipapashiweyo zigcinwa njani
Ngendlela efanayo nepost ezisebenza ngayo, iividiyo zisebenza. Ukugcina iividiyo ezipapashiweyo, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba ugcino oluzenzekelayo loshicilelo luyafumaneka kuseto lwakho. Kwimeko apho impendulo ithi ewe. Into ekufuneka uyenzile kukuthumela ividiyo. Ukwenza oku kuya kufuneka ucinezele i-icon yesithathu yemenyu esezantsi ye-instagram. Olu phawu luphawu +.
Nje ukuba i icon icinyiwe, imenyu iya kuvela, kuya kufuneka ukhethe ukuba ufuna ukurekhoda ividiyo okanye uyikhethe kwigalari yefowuni. Ngaphandle kokuxhomekeka kwinto oyikhethayo inyathelo elilandelayo kuyafana. Kuya kufuneka uyihlele kwaye wenze ukupapashwa kwayo okulandelayo. Ukwazi ukuba le vidiyo ikwiphi kwi-instagram, into ekufuneka uyenzile kukuya ekuqaleni kwe-instagram yakho kunye nokuhlaziywa. Enye indawo apho le vidiyo iya kuba kukutya kwakho. Okokugqibela, ukwazi apho iividiyo ze-Instagram zigciniweyo kwifowuni kufuneka ungene kwigalari yakho.
Apho iividiyo ezihleliweyo zigcinwa khona
Sitshilo ngaphambili ukuba iividiyo zisebenza njengeefoto ngaphakathi kwe-instagram. Xa uhlela ividiyo okanye ifoto ngaphakathi kwe-instagram. Ekuphela kwendlela eya kugcinwa ngayo kukupapasha. Kwaye yintoni ngaphambi koku oku kuseto lokugcina ngokuzenzekelayo. Kwimeko apho oku kungenziwanga, upapasho alugcinwanga kwifowuni.
Iividiyo ezingakhange zilayishwe, kodwa zahlelwa. Bahlala kwimenyu yopapasho. Eli nqaku lilinganiselwe xa lithelekiswa namabali anokugcinwa ngaphandle kokushicilelwa. Kukho nenyaniso yokuba ukuba uphuma, ividiyo ehleliweyo ayisayi kubakho.
Ukugcina iividiyo zeprofayile yomsebenzisi wakho ngokubasusa kwi-feed kodwa hayi eqongeni. Kukho ukugcina. Lo msebenzi we-Instagram uvumela umsebenzisi ukuba asuse iividiyo kwisondlo sakhe ngokuzigcina ngaphakathi kwenye indawo ye-instagram. Ngokungafaniyo namabali e-Instagram. Ushicilelo kufuneka lukhethwe ngumsebenzisi. Kwaye njengoko besitshilo ngaphambi kokuba inyamalale kwiprofayile yomsebenzisi.
Ukufumana iividiyo ezigciniweyo. Kuya kufuneka ufake iprofayile yomsebenzisi. Ngoku, kuxhomekeke kwinkqubo yesixhobo sakho esiphathwayo. Unokufumana i icon yewotshi ekhohlo kwezixhobo ze-iOS kwaye ngasekunene kwezixhobo ze-Android. Xa uyifakile le icon uza kufumana zombini iimpapasho ezigciniweyo kunye namabali.
Ukugcina iividiyo. Into ekufuneka uyenzile kukufaka ividiyo yeprofayile yakho ofuna ukuyikhupha kuyo kodwa ingeyiyo eqongeni. Emva koko cinezela kumanqaku amathathu avela kwikona ephezulu ngasekunene kopapasho ngalunye. Xa sele yenziwe, uthotho lwezinketho ziya kuvela. Phakathi kwazo, kugcinwe ushicilelo.
Enye yeempawu zamva nje ezongezwe kwi-instagram kukugcina iiposti. Ukusuka apho umsebenzisi anokugcina khona imbono yakhe yomibini ividiyo kunye nolunye upapasho lwabanye abasebenzisi njengezabo. Ngoku ngaphakathi kweposi nganye ye-Instagram uza kufumana i icon entsha. Gcina i icon. Le icon ibekwe ngasekunene, kukude kakhulu kwi icon yezimvo.
Ukugcina nayiphi na impapasho kufuneka ucofe i icon yokugcina. Ukujonga izithuba zakho ezigciniweyo unokwenza oku kulandelayo:
Kwizixhobo ze-Android unokufumana i-icon enemigca emithathu. Ukucinezela kule icon kuya kuvela ukhetho oluninzi. Phakathi kokukhethwa kukho uphawu lokugcina luyavela. Ukucofa kule icon uza kufumana iimpapasho ozigcinileyo.
Kwiikhompyuter unokufumana oko ngokufaka iprofayile yomsebenzisi. Ngezantsi nje kwenkcazo, zintathu iindlela onokukhetha kuzo, eyesithathu yezi zinto zine icon yokugcina. Ukungena apha unokujonga iimpapasho owawukhe wazigcina ngaphambili. Nangona imisebenzi ye-instagram evela kwizixhobo ezingezizo zeselfowuni inqongophele, umsebenzi wokugcina kunye nokujonga iifoto ozigcinileyo ngomnye wemisebenzi ekhoyo.
Umda kuphela onokufumaneka kulo msebenzi. Kuyinyani ukuba ezinye izithuba zabanye abasebenzisi azinakugcinwa ngaphakathi kwifowuni okanye kwikhompyuter.
Gcina ezinye iindlela
Kukho iindlela ezahlukeneyo ezingasindiswa ngayo iividiyo ze-instagram. Nangona ezinye zazo zingakhuselekanga ngokupheleleyo. Okokuqala sikubonisa iifom zokugcina eziqhelekileyo ngaphakathi kwe-instagram. Kodwa, kufanele kuqatshelwe ukuba ezi ayizizo kuphela iindlela zokonga. I-Instagram inqongophele ukuba sithetha ngokugcina iividiyo okanye iiposti ezingezizo ezakho kwifowuni. Iifoto zinokuthathwa. Kodwa oku kungomnye umqobo apho iividiyo ziveliswa khona.
Enye yeendlela zokonga iividiyo ngaphakathi kwi-instagram kukukhuphela usetyenziso. Nangona uninzi lwezi zinto zingaqinisekanga, ezinye ziyahluka. Kukho ii -apps ezivumela umsebenzisi ukuba agcine iividiyo zamabali angezizo ezawo. Ngendlela efanayo unokukhuphela okanye ukhuphele iividiyo ze-instagram kwikhompyuter ngokusebenzisa ii-software okanye iiwebhusayithi. Ukukhuphela olu hlobo lomxholo. Kufuneka kuqala uwazi ngamalungelo abo.
Uhlaziyo lwevidiyo ebukhoma
Omnye wemisebenzi eyintandokazi ye-instagram phakathi kosaziwayo kunye nabalandeli babo zezona ngqo. Ukusebenza kwe-instagram kuvumela umsebenzisi ukuba adibane nabanye abantu be-instagram. Phakathi kohlaziyo lwe-instagram olutsha. Gcina ngokuthe ngqo kufumaneka kwifowuni ephathekayo.
Olu hlaziyo lutsha luvumela abasebenzisi ukuba babe nekopi yento endiyenzayo nokuba iyasuswa kwi-instagram. Iividiyo ezibukhoma zigcinwa ngokuzenzekelayo emva kokuphela kosasazo.
1 Ndizigcina phi kwaye ndizibeka phi iividiyo zam ze-imeyile?
2 Ungazigcina kanjani iividiyo zamabali e-instagram
2.1 Gcina ii-albhamu
2.2 Gcina emva kokuhlela
2.3 Gcina ngokuzenzekelayo
3 Iividiyo ezipapashiweyo zigcinwa njani
4 Apho iividiyo ezihleliweyo zigcinwa khona
5 Archive iividiyo
6 Gcina i-Instagram
6.1 Kwizixhobo zefowuni
7 Gcina ezinye iindlela
8 Uhlaziyo lwevidiyo ebukhoma
Ziphi izicwangciso ze-instagram
I-instagram izigcina phi iifoto?